Thor မော်ကွန်းတိုက် - Brick Fanatics
09 / 10 / 2021 09 / 10 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 87 Views စာ0မှတ်ချက် Batman, Black က Panther, ထာဝရက Black Panther Wakanda, Dc, ဆရာဝန်ထူးဆန်း, အရူးဖြစ်၏ ဟူ. ၎င်း၏ Multiverse အတွက်ဆရာဝန်ထူးဆန်း, Lego, Lego Batman, Lego DC က, Lego မှ marvel, Lego ကောလာဟလ, Lego ကောလာဟလများ, Marvel, Marvel စတူဒီယို, ကောလာဟလာ, ကောလာဟလများ, အဆိုပါ Batman, Thor, Thor: အချစ်နှင့်မိုးကြိုး, Wolverine
01 / 10 / 2021 01 / 10 / 2021 ခရစ် Wharfe 110 Views စာ0မှတ်ချက် 76175 ပင့်ကူ Lair အပေါ်တိုက်ခိုက်မှု, 76187 အဆိပ်, ၇၆၁၉၁ Infinity Gauntlet, ၇၆၁၉၆ The Avengers Advent Calendar, 76199 သတ်ဖြတ်ခြင်း, ထွန်းပြက္ခဒိန်, Black ကမုဆိုးမ, သံမဏိလူသား, Lego, Lego Spider-Man, Lego စူပါမာရီယို, Marvel, Spider-Man, စူပါမာရီယို, Thanos, Thor, Zavvi
01 / 09 / 2021 29 / 08 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 255 Views စာ0မှတ်ချက် 41690 Friends ထွန်းပြက္ခဒိန်, 60603 CITY ထွန်းပြက္ခဒိန်, 75307 Star Wars ထွန်းပြက္ခဒိန်, ၇၆၁၉၆ The Avengers Advent Calendar, 76390 ဟယ်ရီပေါ်တာထွန်းပြက္ခဒိန်, ထွန်း, ထွန်းပြက္ခဒိန်, ထွန်းပြက္ခဒိန်, Avengers, Black ကမုဆိုးမ, ကပ္ပတိန် Marvel, City, Friends, ဟယ်ရီပေါ်တာ, သံမဏိလူသား, Lego, Lego CIty, Lego Friends, Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ, Lego မှ marvel, Lego Star Wars, Marvel, နစ်ခ် Fury, Spider-Man, Star Wars, Thanos, Thor, တိုနီ Stark
24 / 08 / 2021 24 / 08 / 2021 ခရစ် Wharfe 322 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, သေစားသေစေသောစည်းဝေးပွဲ, Avengers: နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ, Black ကမုဆိုးမ, Captain America, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Disney+, Hawkeye, hulk, သံမဏိလူသား, အောင်နိုင်သူ Kang, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego မှ marvel, Lego Minifigures, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, သေးသေးလေး, Thor, Thor: Ragnarok, Thor: The Dark ကမ္ဘာ့ဖလား, Throg
04 / 08 / 2021 05 / 08 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 285 Views စာ0မှတ်ချက် 40487 Sailboat စွန့်စားမှု, 76200 Bro Thor ရဲ့ New Asgard, နောက်ကြောင်းပြန်, Korg, Lego, Lego မှ marvel, Lego စတော့ရှယ်ယာ, Marvel, Miek, Shang-Chi နှင့်ဆယ်ပါးလက်စွပ်၏ဒဏ္ဍာရီဇာတ်လမ်းများ, Thor
01 / 08 / 2021 01 / 08 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 344 Views စာ0မှတ်ချက် 76200 Bro Thor ရဲ့ New Asgard, သြဂုတ်လ, စာချုပ်, အပေးအယူ, Korg, Lego, lego အပေးအယူ, Lego မှ marvel, Lego ကမ်းလှမ်းချက်, LEGO ကမ်းလှမ်းမှု, စတော့ရှယ်ယာထဲက Lego, Lego စတော့ရှယ်ယာ, Marvel, Miek, အသေးစား, Sets အသစ်များ, ပေးကမ်း, ကမ်းလှမ်းချက်များ, Polybag, Shang-Chi, Shang-Chi နှင့်ဆယ်ပါးလက်စွပ်၏ဒဏ္ဍာရီဇာတ်လမ်းများ, ရောင်းကုန်ပြီ, စတော့ရှယ်ယာ, Thor
01 / 08 / 2021 28 / 07 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 279 Views စာ0မှတ်ချက် 76194 Tony Stark ၏ Sakaarian Iron Man, 76200 Bro Thor ရဲ့ New Asgard, 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper, သြဂုတ်လ, Avengers, Avengers: နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ, Korg, Lego, Lego မှ marvel, Marvel, Miek, အသေးစား, Thor
27 / 07 / 2021 03 / 08 / 2021 Matthew O'Shea 593 Views စာ 1 မှတ်ချက် 75978 ထောင့်ဖြတ် Alley, 76107 Thanos Ultimate စစ်တိုက်, 76193 အဆိုပါအုပ်ထိန်းသူများ '' သင်္ဘော, Avengers, ချစ်သူ, Drax, Gamora, Groot, က Galaxy ၏အုပ်ထိန်းသူများ, ဟယ်ရီပေါ်တာ, Lego, Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ, Lego မှ marvel, lego ပြန်လည်သုံးသပ်, Lego Star Wars, mantissa, Marvel, Nebula, reviews, ဒုံးပျံ raccoon, Star Wars, စတား-သခင်ဘုရား, အဆိုပါ Benatar, အဆိုပါ LEGO Group, Thor, တိုနီ Stark, UCS, Ultimate စုဆောင်းစီးရီး
ဒီသစ်ကို LEGO ပါသလား Marvel အစုံတစ်ခုမညီကြောင်းကိုးကားပါဝင်သည်?
14 / 07 / 2021 15 / 07 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 418 Views စာ0မှတ်ချက် 76200 Bro Thor ရဲ့ New Asgard, အရက်, ale, ဘီယာ, Ideas, Korg, Lego, Lego Ideas, Lego မှ marvel, Marvel, Miek, Thor
လာမည့် LEGO Marvel ၇၆၂၀၀ Bro Bro ရဲ့ New Asgard ဟာပုံမှန်အားဖြင့်တော့ထွက်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေပါပါတယ်